Fikarohana momba ny firaisana Wayne Peterson ho Reincarnation de Nicolas Roerich - Fikarohana Reincarnation
Voamarina Ahtun Re ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reincarnation Ryerson-Semkiw
Wayne Peterson Paints toy ny Nicolas Roerich
Fantatro i Wayne Peterson tamin'ny taona 2000 mandra-pahafatiny tamin'ny Aprily 20, 2017. Toy ny zokiko lahy izy ary tsy dia malahelo azy aho.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia nahafantatra ny fahalianany aho Nicolas Roerich ary hitako fa ny sary hosodoko nataony ho an'ny rakitsoratra voalohany tao amin'ny bokiny, Fotoana hafahafa, zava-mahatalanjona, tena nitovy tamin'ny sary hosodoko Roerich an'ny tendrombohitra Himalaya. Ity kanto avy amin'ity fonony voalohany ity dia omena etsy ambany sy ankavanana. Tsindrio ny sary hanitatra azy ireo.
Nitranga tamiko fa mety ho ny fiverenan-dohan'ny Rehe- rinta indray i Wayne. Indray mandeha rehefa nitsidika azy tany Las Vegas aho dia nizara tamiko ny hevitro. Amin'ny fanetren-tena, heveriny fa tsy azo atao izany, na dia azoko lazaina aza fa nanitikitika ny mety hiseho izany. Tao amin'ny fivoriana iray niarahan'i Kevin Ryerson, ny Ahtun Re dia nanamafy fa Wayne no fananganana indray ao Nicholas Roerich.
Raha vantany vao nanao an'io fanamafisana io i Ahtun Re, dia nikaroka an'i Roerich aho ary nahita fitoviana mahavariana teo amin'ireo roa ireo.
Mitovitovy amin'i Nicholas Roerich sy Wayne Peterson
Nandritra ny fahazazany, i Nicolas sy Wayne dia samy naniry ny hiasa miaraka amin'i Kristy (Roerich-Rigden Jyepo, Wayne-Jesus)
Nicolas sy Wayne dia samy afaka nanao sary sy nandoko raha tsy nisy lesona. Ity talenta ity dia toa avy tamin'ny fahavelon'i Wayne tamin'ny Claude Ledoux. Misongadina amin'ny ankavanana ny fampitahana ny zavakanto an'i Roerich (ankavia) sy ny kanton'i Wayne Peterson (ankavanana).
Izy roa dia manoratra betsaka momba ny fanahin'i Maitreya, endrika hafa an'i Kristy, na dia nanana traikefa mivantana tamin'i Maitreya i Wayne nandritra ny androm-piainany, izay lazainy ao amin'ny bokiny, Fotoana hafahafa, zava-mahatalanjona.
Samy manoratra betsaka momba an'i Shambala izy roa, na dia nilaza aza i Wayne fa nentin'i Maitreya tany Shambala izy. Shambala, isaky ny Wayne, dia oasis ara-panahy izay miorim-paka amin'ny efitra Gobi.
Izy roa dia manoratra momba ny traikefa UFO
Izy ireo dia manoratra fa ao anatin'ny fotoan-tsarotra sy mosary, ny mpitondra an'i Shambala, Maitreya, dia hiseho sy hamelona ny maha-olona amin'ny sakafo ara-panahy.
Samy administratera manan-talenta izy roa. Nicolas, tamin'ny faha-26 taonany, dia nahazo ny asan'ny talen'ny fiarahamonina ho an'ny famporisihana ny zavakanto ary nitantana sekoly kanto iray avy eo. Wayne dia talen'ny Fulbright Scholarship Program, izay ao amin'ny Departemantam-panjakana any Etazonia.
Roerich sy Ledoux dia nampiasa zavakanto hampisondrotra ara-panahy. Roerich dia nanao lahateny momba ny fitafiana ara-panahy ary Ledeux dia namorona maritrano ara-panahy.
Samy navitrika tamin'ny diplaomasia izy roa. Niara-niasa tamin'ny diplaomaty i Nicolas mba hamorona ny Pact Roerich tamin'ny 1935, hiarovana ny asan'ny zavakanto, ny fiangonana ary ny kolontsaina nandritra ny Ady Lehibe I. FDR no filohan'i Etazonia tamin'izany fotoana izany ary nanohana ny ezak'i Roerich. Noho ny asany dia voafidy ho amin'ny loka Nobel i Roerich. Wayne dia diplaomaty momba ny asa ary nihaona tamin'ny filoham-pirenena amerikana 4 ary nanome famelabelarana momba an'i Maitreya ho an'i Kardinaly Ratzinger izay naharitra adiny 3. Ny fahaizan'i Wayne diplaomatika dia toa mifandraika amin'ny fiainana taloha kokoa, ny an'ny Francesco Foscari.
Samy nanao toy izany izy ireo, nandeha mora, olona.
Fitoviana ara-batana: Ny endrik'i Roerich sy Wayne Peterson dia mitovy be.
Ny fiainana taloha talenta: Na i Roerich sy Wayne dia afaka nisintona sy nandoko natiora, tsy nisy lesona. Toa manomboka amin'ny fiainana alohan'ny fotoana toy izao ity talenta ity Claude Ledoux.